Ahoana ny fomba hahitana ny teny fanalahidy marina ho an'ny lisitra Amazoniko?
Tsy ilaina ny milaza fa raha mivarotra Amazon ianao, dia tsy maintsy manana zavatra betsaka hatao ianao, be loatra mba hitantanana, ary koa maro loatra hijerena mba ho tafavoaka velona ao anatin'ny fifaninanana tena misy eo amin'ny governemanta. Ary ny tanjona hahitana ny teny fanalahidy marina ho an'ny lisitra Amazon dia tsy fanilikilihana amin'ity fitsipika tsotra ity. Midika izany fa indraindray dia mety ho sarotra ny mamantatra ireo fehezan-teny mahomby avo lenta sy ireo teny fototra ifantohan'ny lasibatra mba hametrahana lisitra ao Amazona izay tena hivarotra. Ary andao hiatrika izany - mila fitaovana azo ampiasaina manokana ianao mba hanampiana anao amin'izany. Soa ihany fa misy ny fahafahana midadasika amin'ny sehatr'asa samihafa amin'ny rindrambaiko sy rindrambaiko natao ho an'ny fanadihadiana lalindalina kokoa mba ahafahana mamantatra ny fitenenana farany amin'ny fampielezana ny lisitra amazonin'i Amazon ho eny an-tampon'ny fikarohana. Fa ahoana kosa ny fomba ahafahana manao safidy tsara eo anivon'ireo antontan'isa mahavariana tsara azo atao amin'ny fisokafana amin'ny Internet? Ireto misy vahaolana vitsivitsy ampiasaina hanampiana anao handray safidy tsara, na farafaharatsiny farafaharatsiny.
1. Keyword Inspector - no fitaovana voalohany tiako haseho anao anio. Ity mpanampy an-tserasera ity dia azo antoka fa safidy tsara indrindra ahafahana mahita lisitry ny fanalahidy tsara indrindra ho an'ny Amazon lisitra. Anatin'ireo antoko matanjaka indrindra, te-hanasongadina ny endriny tena ilaina aho izay ahafahana manana fanaraha-maso haingana ary mahita ny teny rehetra sy ny lavaka fikarohana amin'ny lava-pandrosoana na ny lahatahiry na ny vokatra amin'ny sokajy misy anao. Ankoatra izany, ny Keyword Inspector dia manondro ny fitaovana tsara rehetra, mba ho marim-pototra kokoa. Amin'ny alàlan'ny fanamarihana, dia misy ny Soso-kevitra amin'ny Soso-kevitra Amazôna (hanampy anao haingana ny mamantatra ireo teny fanalahidy rehetra mety hahazoana azy), Indexation Tester (mba hahitana raha voamarina tanteraka ny teny fanalahidy avy amin'ny Amazon lisitra ka ho hitan'ny mpividy mivantana azy ireo) , ary ny Search Term Optimizer Tool (mba hanampiana anao hampitombo ny fisehoana ankapobeny amin'ny fikarohana an-tserasera).
2. Teny Merchant - safidy tsara hafa iray hanampy anao haingana hitady ny teny fikarohana tena ampiasain'ny olona velona amin'ny alàlan'ny fividianan-tserasera isan'andro amin'ny alàlan'ny Amazon, fa amin'ny sisa ny tsena malaza sy ny sehatra ecommerce any an-kafa any amin'ny aterineto (ohatra, amin'ny Walmart na Jet). Raha ny amiko, dia hitako fa ity fitaovana ity dia tena mahasoa tokoa ny hahazoana sary lehibe ny teny fanalahidy amin'ny hevi-dehibe azo tsapain-tanana amin'ny fampiasana azy ireo. Farany, ny teny Merchant dia toa nitovy tanteraka ihany koa ny hitadiavana ny teny fanalahidy mitovy amin'izany sy ireo fehezan-teny mifandraika amin'izany izay mety hahazoana fandresena, nefa mbola miseho ihany koa ho an'ny lionan'ny fifandraisany mivantana amin'ny Amazon.
3. Jungle Scout - no fitaovam-pandrafetana farany indrindra, izay tsy fanaovana fikarohana afa-tsy fampihetseham-po mahomby amin'ny soso-kevitra tena ilaina. Ankoatra izany - io safidy io dia mety ho tena mahasoa rehefa mikaroka ireo vokatra malaza azo amidy amin'ny Amazon, ary koa ireo nicha notakiana mafy indrindra izay eo an-tampon'ilay lazany amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ny rakitra malalaka, ny Jungle Scout dia afaka manome ny fototry ny fotodrafitrasa rehetra ilaina ho anao mba handraisana fanapahan-kevitra tsara sy amin'ny fanapaha-kevitra momba ny angona, mety ho an'ny dingana rehetra amin'ny fampiroboroboana ny vokatrao. Mariho anefa, fa ity fitaovana ity dia efa miha-mivoatra kokoa, natao ho an'ny mpivarotra efa-taona izay efa manana traikefa fototra ao amin'ity sehatra ity Source .